Doodii Xildhibaanaddu ay ka lahaayeen Qadiyadda Qalbidhagax oo la soo gabagabeeyay – Hornafrik Media Network
Doodii Xildhibaanaddu ay ka lahaayeen Qadiyadda Qalbidhagax oo la soo gabagabeeyay
Doodii Xildhibaanada Golaha shacabka ay ka lahaayeen qaraarkii Xukuumadda ka qaadatay dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax ayaa soo dhamaatay, iyadoo Guddoonka Baarlamaanka uu ku dhawaaqay in arrintan loo saaray Guddi.
Guddiga ayaa dib ugu noqon doona Dastuurka iyo Xeerarka kale ee Dalka waxay ka qabaan Go’aankii Xukuumadda. Waxaana kadib ay soo diyaarin doonaan Qodobadda Shuruucda Dalka ee ka hadlaya arrimahan, iyagoo Xukuumaddana wax ka waydiin doona Go’aanka ay qaateen, iyo Sharci ahaan waxay u cuskadeen.
Golaha Shacabka oo billaabay ka doodista Qadiyada Qalbidhagay, Akhriso Dooda.
Akhriso Hindise Sharciyeedyada Maanta La Horkeenay Golaha Shacabka.